KMF/Cnoe : “Be ny kajikajy politika hanilihana kandidà amin’ny fifidianana” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Be ny kajikajy politika hanilihana kandidà amin’ny fifidianana”
Par Taratra sur 03/02/2018
Nanao fanambarana ny eo anivon’ny KMF/Cnoe ary nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena. Anisan’izany ny hiatrehana ny fifidianana.
“Tsapa fa betsaka ny kajikajy politika entina hanilihana ny mpifanandrina izay miteraka fifampihantsiana sahady amin’ny samy mpanohana”, hoy ny fanambaran’ny KMF/Cnoe, nampitainy tamin’ny tranonkalam-pifandraisana, omaly.
Ny olana, tsy mbola misy lalàna mifehy ny “pré-campagne” eto amintsika. Tokony hifampidinihina izany, fa samy manao izay saim-pantany ny rehetra. Anisan’izany ny fitokanana maro samihafa, ny fitsidiham-paritra amina endrika fampielezan-kevitra.
Tsy tokony izany hatao izany mba hisian’ny fitovian’ny herijika ho an’ireo olona rehetra mirotsa-kofidina. Tena manampatra fahefana ny mpitondra ankehitriny, fa maro ny hetsika sy ny fomba miendrika fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana.
“Tokony hangarahara avokoa izay rehetra momba ny fiainam-pirenena. Anisan’izany ny fangaraharan’ny zotram-pifidianana”, hoy ny fanambarana. Zava-dehibe amin’ny fiainam-pirenena ny fifidianana.
Tokony ho voafaritra mialoha ny datim-pifidianana
Ny lalàmpanorenana no mamaritra ny fifidianana mba hisian’ny fifanekena demokratika eto amin’ny firenena. Izany no hanamafisana fa tokony ho voafaritra mialoha ny datim-pifidianana, ary tokony ho voarafitra ao anatin’ny fangaraharana ny lalàm-pifidianana: ao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna. Mba hisian’ny fifampitokisan’ny mpisehatra rehetra izany. Na mpanao politika io, na tomponandraikitra feno amin’ny fikarakarana ny zotram-pifidianana, na ny firaisamonina sivily, indrindra ny olom-pirenena.
Raha vao misy mampiahiahy ny olom-pirenena, anisan’izany ny fivoizana ny fanavaozana ny lalàmpanorenana, vao mainka tsy hanome lanja ny fifidianana izy, tsy handeha hifidy rehefa voahitsakitsaka ny demokrasia sy ny fahalalahan’ny tsirairay avy. “Averina ombieny ombieny fa antoky ny fifidianana eken’ny rehetra ny fangaraharana”, hoy ny KMF/Cnoe.